Xisbullah oo heshay hub ay ka cabsi qabtay Israel | Aftahan News
Xisbullah oo heshay hub ay ka cabsi qabtay Israel
Beirut (Aftahannews) — Hoggaamiyaha ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in kooxdiisa ay hadda haysato laba laab tirada gantaallada la hago ee ay haysatay sanad ka hor, islamarkaana isku dayo ay Israel kaga hortageysay inay hubkaas helaan uu fashilmay.
Nasrallah ayaa sheegay in markii ay Israel ugu hanjabtay Xizbullah, iyada oo usoo marineysa sarkaal Mareykan ah, inay weerereyso xarumo ku yaalla gobolka bari ee Bekaa, ay kooxdiisa ka digtay inay aargudan doonto.
Hoggaamiyaha ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan
Intii uu socday wareysiga, ayaa Nasrallah waxa uu sheegay inay jiraan arrimo badan oo kooxdan ku saabsan oo ayna Israel waxba ka ogeyn, sababtoo ah buu yidhi “aad ayaa loo qariyaa.”
Waxa uu sidoo kale sheegay in toddobaadyada xilka uga hadhay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay yihiin kuwa xasaasi ah, oo ay tahay in taxaddar leh loola macaamilo. Waxa uu Trump ugu yeedhay “mid waalan oo cadheysan.”